संगीत Archives - Page2of 122 - www.dthreeonline.com
आमाको गीत गाउदै अमेरिकन आईडलको उत्कृष्ट ७ मा पुगे नेपालका दिवेश
ईटहरी/ दिवेश पोखरेल उर्फ आर्थर गन अमेरिकन आइडलको शीर्ष ७ मा उक्लिएका छन् । आइतबार ‘इन्टरनेशनल मदर्स दे’ को अवसरमा दिवेशले आमाको ममता झल्काउने बोन आइभरको निकै चर्चित गीत ‘हे, मा’ गीत गाएका थिए । यसपटकको उनको प्रस्तुतीमा उनीसँगै उनका आमा र बुवा पनि देखिएका छन् । अमेरिकन आइडलको अडिसनदेखि नै आर्थरले निर्णायकहरुको अत्यधिक तारिफ पाउँदै आएका छन् । शीर्ष ७ मा आइपुग्दासम्म उनको तारिफको क्रम जारी छ । दिव...
दिपकले ल्याए ‘ओ भाइ मारो मुझे’ भन्दै सुनौ-सुनौ लाग्ने कोरोना गीत
ईटहरी/ लकडाउनमा दर्शक श्रोतालाई मनोरन्जन प्रदान गर्ने हेतुले तयार पारिएको नयाँ र्‍याप गीत डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ । दिपक आरजेको शब्द तथा संगीत र हरिश सिन्हाको स्वर रहेको गीतलाई रयाड्स स्टुडियोको युट्युव च्यानलमार्फत आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोना महामारीका बेला पनि समाजमा भइरहेको विसंगति, बिकृति, भ्रस्टाचार र अन्धविश्वासलाई गीतको माध्यमबाट झटारो हान्ने प्रयास गरिएको स...
लकडाउनमा अबुनको ‘महसुस’ सार्वजनिक
ईटहरी/ लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै गायिका अबुन पाण्डेले आफ्नो नयाँ सिर्जना ‘महसुस’ सार्वजनिक गरेकी छिन । अनपल्ग्ड भर्सनको ‘महसुस’मा गायिका पाण्डेको मनछुने मेलोडियस स्वर सुन्न सकिन्छ । हाल अस्ट्रेलियामा रहेकी गायिका पाण्डेले अस्ट्रेलिया र नेपालमा रहेका संगीतकर्मी संगको सहकार्यमा छोटो समयमा नै तयार गरेर यो गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । गीतमा स्वर र शब्द गायिका अबुन पाण्डेको रहेको छ भने संग...
अमेरिकन आईडलमा नेपाली दिवेशलाई जिताउन नेपालमा यसरी हुँदै छ प्रचार
काठमाडौँ/ नेपालका दिवेश पोखरेल ‘अर्थर गन’ यतिबेला चर्चामा छन् । कारण उनी चर्चित रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको टप १० मा प्रवेश गर्न सफल भएका छन् । काठमाडौँका स्थायी वासिन्दा रहेका पोखरेलले हासिल गरेको सफलताबाट उनको परिवार र टोलवासी पनि हर्षित् हुने नै भए । त्यही भएर प्रतियोगितामा पोखरेललाई विजयी बनाउन उनको टोलबासी यतिबेला प्रचारमा जुटेका छन् । शनिबार पोखरेललाई भोट गर्न अपिल गर्दै प्लेकार्ड...
अमेरिकन आईडलबाट चर्चा कमाएका नेपाली दिवेश कसरी ‘अर्थर गन’ बन्न पुगे ?
ईटहरी/ धेरैलाई दिवेशको अंग्रेजी नामको विषयमा पनि कौतुहल छ । अमेरिकन आइडलमा उनलाई ‘अर्थर गन’ भनेर चिनाइएको छ । साथै सामाजिक सञ्जालका विभिन्न अकाउन्टहरुमा पनि उनले यही नाम प्रयोग गरेका छन् । नेपाली नाम लुकाएको भनेर कतिपय नेपाली फ्यानहरु खुशी छैनन् । ‘अर्थर गन’ दिवेशको ‘स्टेज नाम’ हो । एक अन्तरवार्तामा दिवेशले बताएअनुसार उनले सन् २०१८ बाट यो नाम प्रयोग गर्न थालेका हुन् । अमेरिकाको सांगीतिक क्...
सर्वाधिक भोटसहित अमेरिकन आईडलको उत्कृष्ट १० मा दिवेश, नेपालबाट यसरी गर्नुस् भोट
नेपालबाट सिधै भोट गर्ने तरिका : ईटहरी/ चर्चित सिङ्गिङ रियालीटी शो, अमेरिकन आइडलमा दमदार प्रस्तुति दिँदै आएका नेपालका दिवेश पोखरेल शीर्ष १० मा पुग्न सफल भएका छन् । यसअघि पनि उनको प्रस्तुतिले ‘स्ट्यान्डिङ अवेसन’ पाएको थियो । अमेरिकन आइडलको १८औं सिजनमा शीर्ष १० मा पुगेका उनले स्टेजमा ‘आर्थर गन’ को नामले प्रस्तुति दिने गरेका छन् । हाल उनलाई भोट अपिलको लागि विभिन्न माध्यम बाट उनका प्रसंशकले सहयो...
सन्ध्याको यादमा यसरी चुर्लुम्मै डुबे बिमोचन
गायक बिमोचन खनालले आफ्नो डेब्यु गीत 'तिम्रो यादले' सार्वजनिक गरेका छन् । विगत ६ वर्ष देखि अस्ट्रेलियामा बसेर अध्ययन र आफ्नो संगीत यात्रा अघि बढाइरहेका खनालले कोरोना कहर बिच गीत संगीत प्रेमीलाई मनोरंजन प्रदान गर्न म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । सानै देखि गीत संगीतमा रुचि राख्ने खनालले आफ्नो पहिलो प्रयास स्वरुप यो गीत दर्शक स्रोतालाई पस्किएका हुन् । एल्बम 'समय' मा समावेश 'तिम्रो या...
जिन्दगी पूरा हुन कस्ले खोज्दै केकिको साथ ?
ईटहरी/ कोरना कहर बिच नेपाली गीत संगीत प्रेमीहरुलाई संगीतको माध्यम बाट मनोरंजन दिन गायक सुब्रत रेग्मीले आफ्नो बिल्कुलै नयाँ म्युजिक भिडियो ‘पुरा हुन जिन्दगी’ सार्वजनिक गरेका छन् । रोमाण्टिक भर्सनको यस गीतमा मानिस एक रहन असल छैन, जिन्दगी जिउन साथी चाहिन्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ । गीतमा स्वर गायक सुब्रत रेग्मीको रहेको छ भने शब्द अनिल शर्माको रहेको छ । गीतमा संगीत बिशाल पौडेलको रहेको छ ...
बलिउड म्युजिक भिडियोमा नेपालि मोडल रिस्ताको डेब्यु, भारतका चर्चित टिकटकर्ससंग रोमान्स
ईटहरी/ नेपालि कलाकार तथा नायक नायिका हरुको बलिउड मोह निक्कै देखिने गरेको छ । कहिले आफ्नो बलिउड सपनालाई पुरा पनि गरेका छन् भने केहि निरन्तर संघर्षमा जिटिरह्का छन् । यस्तैमा एक नेपालि नायिका तथा मोडल रिस्ता बस्नेत बलिउड म्युजिक भिडियो इण्डस्ट्रिमा डेब्यु गर्ने मौका पाएकी छन् । उनि फिर्चड हिन्दी गीतको भिडियो भर्खरै जी म्युजिक कम्पनि नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ । भिडियोले सार्बज...
मंगलबार, बैशाख १६, २०७७
लण्डन/ ‘सन्डे मार्निङ लभ यू’ गीतबाट चर्चित भएका गायक भीम निरौलाले ‘ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट’ मा आफ्नो सिग्नेचर गीत गाएर सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका छन् । ५४ वर्षीय भीम निरौलाले बेलायतको चर्चित टेलिभिजन शोको अडिशनका क्रममा सो गीत गाएका हुन् । भीमले गीत गाएको केही सेकेन्डभित्र निर्णायकमध्येका एक कोवेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजर दबाए पनि दर्शक दीर्घाले उनको प्रस्तुतीलाई हात बजाएर स्वागत गर्यो ।...